प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ‘छौडा’ लेखेपछि सर्वत्र आलोचना « Khabarhub
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ‘छौडा’ लेखेपछि सर्वत्र आलोचना
काठमाडौ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले आइतबार बिहानै गरेको ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । उनले बिहानै एकदमै आक्रोसित हुँदै ट्वीटरमा लेखेका छन् : ‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन् कसैले छोड्छन्, दु:ख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् की कसैले छोडेका?’
उनको यो ट्वीटपछि सामाजिक सञ्जालमा बेग्लाबेग्लै टिप्पणी पनि आइरहेको छ । उनले किन लेखे । जिम्मेवार मान्छेले यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा पर्ने प्रभाव किन हेरेनन् भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।
नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नौ सांसदहरुले सरकाको कडा आलोचना गरेपछि आएको यो ट्वीटका विषयमा अहिले नेकपा वृत्तमा छलफल चलिरहेको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषदी परिक्षण गर्न रोकेको विषयका चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले सरकार भारतसामु झुकेको समेत आरोप लगाएका थिए । गुठी विधेयकलगायतमा विषयमा पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरु आक्रामक देखिएका थिए ।
त्यसैतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार रिमालले छौंडा शव्दको प्रयोग गर्दै ट्वीट गरेका छन् । उनको यो ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउने अधिकांशले रिमालको सोच,शैली र भाषा छनोटको चर्को विरोध गरेका छन् ।
हेर्नुहोस रिमालले गरेको ट्वीट र त्यसपछि आएका प्रतिक्रिया
— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) July 7, 2019
उसा किरण तिम्सिनाले रिमाललाई मेन्सन गर्दै लेखेकी छन्-‘कमरेड तपाँई पार्टीको स्यायी कमिटी सदस्य र प्रम ज्युको सल्लाहकार दुबै पद बाट राजिनामा दिनुस् । यो चेतनास्तरले दुबै पदलाई न्याय गर्न सक्दैन ।’
त्यस्तै विष्णु पाण्डेले पनि रिमाललाई नै मेन्सन गर्दै लेखे- ‘कठै सल्लाहकारज्युका शब्द चयन! भोली फेरी यही समाजमा सामान्य नागरिकको रुपमा जिवन यापन गर्नु पर्ने दिन आउदैन ? कि त्यती दुरर्दर्शिता पनि छैन ? सोचाइ साह्रै निकृष्ट र भाषा तल्लो स्तरको हुनुपर्ने बिशेषता सहित सल्लाहकार पदको आबेदन माग भएको थ्यो कि पद नै यस्तो हो या पारिवारिक गुण ?’
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आइतबार १० : २० बजे